Isisombululo - iShanghai Huizhou Industrial Co., Ltd.
Umsebenzi wethu uzinikele ekuqinisekiseni umgangatho okhuselekileyo kunye nomgangatho ongcono wokutya kunye namayeza ngokusebenzisa izisombululo zokupakisha ezilawulwa bubushushu.
Phantsi kweemeko zokuphuhla koqoqosho olukhawulezayo kunye nemigangatho ephezulu yobomi, kunye nokwandiswa ngokubanzi kweenkonzo ze-e-commerce, abantu banako kwaye banomdla wokuthenga ukutya okukhuselekileyo, okukhawulezayo kunye nokufanelekileyo kunye namayeza oko kuthetha ukuba abathengi bafuna ukugcina iimpahla zabo zihlala ukuqala kude kube sekupheleni. Kwaye seso sizathu sokuba ukuthuthwa kwamakhonkco abandayo kuya kusanda. Kwaye abantu banoluvo lokukhusela ubushushu kwiimveliso zabo ezibuthathaka.
Le yindlela inkampani yethu eyabakho ngayo. Yasekwa ngo-2011, yaye mveliso-7 e-China, Huizhou Industrial Co., Ltd. lizinikele kuphela ingqokelela ingqele ubushushu-elawulwa ukuphakheja. Sibonelela ngokwahluka kobungcali kwezisombululo zokupakisha zokutya kunye namayeza, sibakhusela ekonakaleni okanye ekonakaleni.
E-shanghai, sineqela lethu lobuchule be-R & D kunye neengcali kunye neenjineli ezinamava. Kwaye kunye nelebhu yokuvavanywa kobushushu kunye negumbi lemozulu yokusingqongileyo, sinokunika iingcebiso okanye sinike ezethu izisombululo kubathengi bethu ukuqinisekisa ukuba ukuthunyelwa kwemveliso kukhuselekile.
Izixhobo zethu zeR & D
Ukuphonononga izisombululo zokuhambisa ezilawulwa bubushushu kangangoko kunokwenzeka, kunye nokuhlangabezana nokwanda okukhulu kwimfuno yokupakisha okulawulwayo kunye neemfuno ezingqongqo zabathengi bethu, sineqela lethu lobungcali le-R & D kunye neenjineli eziphambili zeminyaka engaphezu kwama-7 yamava iinkalo ezinxulumene noko, sisebenza ngokubambisana nangempumelelo kunye nomcebisi wethu wangaphandle ophezulu. Isisombululo esinye esisebenzisekayo, iqela lethu le-R & D lihlala lenza uphando kuqala kwaye lixoxe kunye nabathengi bethu ngokunzulu, emva koko lenze uvavanyo olukhulu. Okokugqibela basebenzela esona sisombululo silungele abathengi bethu. Sinezisombululo ezininzi eziqinisekisiweyo ezilungiselelwe kunye nolungelelwaniso olwahlukileyo lokudibanisa iimfuno zakho ezithile kunye nokugcina iimveliso zifika kwiqondo lobushushu zikhuselekile zikwimeko entle kude kube ziiyure ezingama-48.
Iqela lobuchwephesha kwezobuchwephesha ekuqinisekiseni indawo yethu ekhokelayo kushishino lokubandayo e-China.
Ungqongqo ngokungqongqo kwimigangatho esemgangathweni yeshishini, emva kovavanyo oluphindaphindiweyo kunye nokuqinisekiswa